Akafananidzwa matanda | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Rudzi rwekuvaka matanda. Kutenda kune zvakaenzana zviyero uye yakakosha yekubatanidza grooves (iyo yekushandira inogadzirwa kuburikidza neane-mativi ekugaya muchina), inokurumidza uye nyore kuunganidzwa uye kuunganidzwa.
Akafananidzwa matanda - inodzivirira nharaunda, haidi yekuwedzera yekunze, uye kazhinji, kushongedzwa kwemukati. Zvinoenderana nedanho rekugadzira huni, mapoka matatu ematanda akafananidzwa anogona kusiyaniswa, ayo anogona kunge akasiyana muhukuru uye saizi. Zvimwe zveboka rega rega.
Akafananidza matanda ehumwe hunyoro
Iyo inogadzirwa kubva kumativi ese akatanhamara ehumwe hunyoro. Inonyanya kufarirwa nekuda kwemutengo wayo wakaderera. Nyore kuungana. Inoda kumwe kugadziriswa kwehuni kubva pakuora uye zvipembenene zvehuni.
Imba irikudzikira. Kutsemuka kunogona kuumba, zvinova ndizvo zvakajairwa hunyoro hwekuvaka matanda. Kutsemuka kunogona kurapwa (kwakavharwa) neakasarudzika putty yehuni, kana iwe unogona kuvasiya kunge mune chaiyo nyika imba.
Matanda akaomeswa akaomeswa
Yakagadzirwa nematanda akakomberedzwa, inova kupisa inorapwa mukamuri yekuomesa. Munguva yekuomesa, kutsemuka kunogona kuumbika, chinova chimiro chehunhu hwehunhu hwehuni hunotarisirwa pakurapa kupisa, zvine hukama nehunhu hwehuni.
Akaomeswa akaomeswa matanda - akadhura, ane zvakatipoteredza ane hushamwari, nyore kuisa. Imba yakagadzirwa nezvinhu zvakadai yakagadzirira kugamuchira varidzi pazuva rekutanga chairo mushure mekupedzwa kwekuvaka.
Pamwe hapana shrinkage. Panogona kunge paine shanduko diki muhukuru nekuda kwemamiriro ekunze kana mwaka (izvi ndizvo zvinoitika kumatanda akaoma ekuvaka).
Inoda yakaderera yekugadzirisa mutengo kurwisa kuora uye zvipembenene zvehuni pane huwandu hwemapuranga ehumwe hunyoro.
Akanamatira profiled matanda
Yakagadzirwa kubva kuhuni hwakaoma. Inosanganisira zvikamu zvakasiyana (mabhodhi) ayo anogona kunamirwa (akapetwa) zvese muhupamhi nekukwirira, zvinoenderana nechinangwa, uye nehurefu.
Iko kunakirwa kwemapuranga e laminated veneer kukura kwayo. Hurefu hwezvinhu - kusvika pamamita gumi nemaviri kana kupfuura, hupamhi nekureba zvinogona kusiyana. Hazvitsemuki.
Kuonekwa kwemadziro akagadzirwa nebhawa rakadaro kunochengetedza ese aesthetics eiyo imba yemapuranga. Pakati pezvikanganiso, mutengo chete ndiwo unogona kucherechedzwa (mutengo wemuti unonamirwa wakakwira zvishoma pane wakajairwa profiles), nekuwedzera, kune chimiro chemakemikari (glue) muchimiro chehuni.
Mhando huru dzematanda
Matanda anoyevedza kana matanda akafananidzwa: zviri nani kusarudza?
Norwegian vertical log house
Matanda maviri: kuvaka imba uchishandisa tekinoroji yeFinland
Posted in kuvaka nekugadzirisa
Mibvunzo ye58 mu database yakagadzirwa mu 0,643 masekondi.